Izindaba - I-DUTTILE IRON production line yethulwe futhi isebenza kusukela ngo-2021
IDuctile Iron factory isungule kusukela ngo-2021
1. Isingeniso Esifushane:
I-Ductile cast iron iyinsimbi enamandla kakhulu yensimbi eyakhiwa ngawo-1950. Ukusebenza kwayo okuphelele kusondele kokwensimbi. Ngokuya ngokusebenza kwayo okuhle kakhulu, isetshenziswe ngempumelelo ukwenza amabutho athile ayinkimbinkimbi futhi ngokufuna ngamandla amandla, ukuqina, nokugqoka ukumelana. I-Ductile cast iron ikhule ngokushesha yaba yinsimbi yensimbi yesibili kuphela yensimbi yensimbi futhi isetshenziswa kabanzi. Okubizwa ngokuthi "ukufaka insimbi esikhundleni sensimbi" ikakhulukazi kubhekisa ku-ductile iron. I-Ductile cast iron ithola i-ductile graphite nge-spheroidization kanye nokwelashwa kwe-inoculation okuthuthukisa ngempumelelo izakhiwo zemishini yensimbi yensimbi, ikakhulukazi i-plasticity nokuqina, ngaleyo ndlela ithole amandla aphakeme kune-carbon steel.
Ukufakwa kwensimbi kwe-Ductile sekucishe kwasetshenziswa kuyo yonke imikhakha emikhulu yezimboni, edinga amandla aphakeme, i-plasticity, ukuqina, ukugqoka ukumelana, ukumelana nokushaqeka okukhulu kwe-thermal kanye ne-mechanical, ukumelana okushisa okuphezulu noma okuphansi, ukumelana nokugqwala, kanye nokuqina kobukhulu. Ukuze kuhlangatshezwane nalolu shintsho ezimweni zokusetshenziswa, i-ductile iron inamamaki amaningi, inikezela ngezindawo ezahlukahlukene zomshini nezomzimba.
Izinto ezibonakalayo: QT450-10
Izingxenye zokungcebeleka zensimbi ze-ductile zezingxenye zangaphansi kwesithuthi, njengesembozo sokuphela kwesithwali senkampani yenethiwekhi, ukhololo we-roller roller, ubakaki we-idler
5.Production umthamo: 500-550T / Inyanga, okuzenzakalelayo ukukhiqizwa umugqa.
1) Uma kuqhathaniswa nensimbi yensimbi, i-ductile cast iron inenzuzo ngokuphelele emandleni. Amandla we-densile cast iron angama-60k, kanti amandla we-tensile we-cast iron angama-31k kuphela. Amandla wokuvuna we-ductile cast iron angama-40k, ngenkathi i-iron yensimbi ingakhombisi amandla esivuno futhi ekugcineni iqhekeke. Isilinganiso samandla nezindleko zensimbi ye-ductile siphakeme kakhulu kunaleso sensimbi eyakhiwe. Amandla wensimbi e-ductile aqhathaniswa nawensimbi eyakhiwe.
2) Uma kuqhathaniswa nensimbi yensimbi, i-Ductile cast iron inamandla amakhulu wesivuno, kunensimbi yensimbi. Izindleko eziphansi zensimbi eyindilinga ye-graphite cast yensimbi yenza le nto ithandwe kakhulu, ukusebenza kahle kokulingisa kuphakeme, futhi izindleko zemishini zensimbi eyinsimbi ye-graphite cast iron iyancipha.
I-3) Ngakho-ke, ngemuva kokuthi izingxenye zokufaka ingcindezi zensimbi ye-ductile icutshungulwe ngumjikelezo wokufaka umanyolo, isakhiwo esiyindilinga ngaphakathi kwensimbi yensimbi ye-ductile nayo ingaqeda isimo sokuqhekeka okulula ukukhiqizwa i-flake graphite ngaphakathi kwe-iron cast. Ku-microphotograph yensimbi ye-ductile, imifantu ingabonakala ukuthi iyanqamuka ngemuva kokufinyelela ibhola le-graphite. Emkhakheni we-ductile iron, la mabhola we-graphite abizwa ngokuthi "ama-crack stopper" ngenxa yekhono lawo lokuvimbela ukuphuka.